1 USD သို့ CNY ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် တရုတ် ယွမ်
1 USD သို့ CNY
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇨🇳 တရုတ် ယွမ်. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ CNY. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်? — ¥6.427 CNY.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း CNY သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD CNY သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD CNY သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: ¥6.427 CNY (-0.0123)-0.191%
ပြောင်းပြန်: $0.156 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် တရုတ် ယွမ် ခဲ့: ¥7.110. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -0.682 CNY (-9.60%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်1 ထိုင်းဘတ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.011 Bitcoin သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်2590000000000 အီရန်ရီအော်လ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်3500000000000 အီရန်ရီအော်လ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0001 Bitcoin သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်0.00001 Bitcoin သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်0.001 Bitcoin သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်13.24 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ရုရှ ရူဘယ်20000 ပါကစ္စတန် ရူပီး သို့ အဇာဘိုင်ဂျန်မာနတ်4730 ကူဝိတ်ဒီနာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်20000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး76.55 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်7200 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ယူရို